मोदीले भेट्ने समय नै दिएनन्, रक्षामन्त्रीलाई भेट्न पाउदा नतमस्तक पराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली ! « Rara Pati
मोदीले भेट्ने समय नै दिएनन्, रक्षामन्त्रीलाई भेट्न पाउदा नतमस्तक पराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली !
४ माघ, काठमाडौं । नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको छैठौं बैठकमा भाग लिन बिहीबार नयाँदिल्ली पुगेका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली तीन दिने भारत भ्रमण सकेर शनिबार स्वदेश फर्किए । मन्त्री ज्ञवालीको भारत भ्रमणलाई निकै चासो र महत्वका साथ हेरिए पनि भारतले भने राजनीतिक महत्व नदिएको स्पष्ट भएको छ ।
गत वर्ष भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र समेटेर नक्सा जारी गरेपछि पराराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली पहिलो पटक नयाँदिल्ली पुगेका थिए । आयोगको बैठकमा सहभागि हुने बाहेक मन्त्री ज्ञवालीको भारत भ्रमणले दुई देशबिचको कट्नीतिक सम्बन्ध सुधारमा तात्विक अर्थ राख्न सकेन ।
सीमा समस्यादेखि जलस्रोत र कोरोना भ्याक्सिनसम्मका एजेन्डा लिएर ज्ञवाली दिल्ली गएका थिए । तर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई अन्तिम समयसम्म शिष्टाचार भेटको लागि पहल गरेपनि मोदीले इन्कार गरिदिए । अन्तमा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहलाई भेटेर उनी नेपाल फर्किसकेका छन् ।
अनौठो विषय के छ भने मन्त्री ज्ञवालीको सार्वजनिक फोटोले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्खरै भारतीय सञ्चारमाध्यम जि न्यूजमा दिएको अन्तर्वार्तालाई हाँस्यास्पद साबित गरिदिएको छ । भारतीय समकक्षि रक्षामन्त्रीलाई भेट्दा हाम्रा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली यति झुकेका छन् कि त्यति त कुनै आम नेपाली शायदै झुक्छन् । दुई देशका मन्त्रीहरू भेट्दाको फोटो हेर्दा जो कसैलाई पनि अस्वभाविक लाग्छ ।
रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह